अर्थ Archives - Samudayiknews
Sep192019 by userNo Comments
दर्जीको ह’त्यापछि परिवारको विचल्ली, ‘किरिया खर्च नै छैन्’
गलेश्वर । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रुम खबाङका मोतिप्रसाद दर्जीको ह त्या भएपछि उनका परिवार विचल्लीमा परेका छन् । गत भदौ १९ गते राति म दिरा सेवन गरेका तीनजना युवाले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा घरमै आएर कु टपिट गर्दा मोतिप्रसाद दर्जीको मृ त्यु भएको थियो । अत्यन्त गरीब परिवारका दर्जीले आरा चिरेर परिवारको गुजारा चलाउने गर्दथे । दर्जीको मृ त्युपछि दुई छोरा,तीन छोरी र श्रीमतीको बिचल्ली भएको स्थानीयवासी विष्णु पुनले जानकारी दिइन । पुनले दिएको जानकारी अनुसार कलिला पाँचजना छोराछोरी बुबाको मृ त्युपछि भक्कानियर रुने गरेका छन्, भने मृ तक दर्जीकी श्रीमती सन्तकुमारी दर्जीको आँखा पनि अझै ओभाएका छैनन् । घरको पिँढीमा छोराछोरीसँगै बसेकी दर्जीको आँखामा टिलपिल आँसु भरिन्छ । दर्जीलाई भेट्न तथा समावेदना प्रकट गर्न आउनेहरूलाई देखेर उनका आँखा झनै रसाउँछन् । दुई छोरा र तीन छोरीको बीचमा बसेकी सन्तकुमारीलाई श्रीम
हजारको नोट अर्थात सजिलो भाषामा–‘हात्ती’ । तर, यसको त्यही हात्तीमाथि प्रश्न उठेको छ – के यो नेपाली नै हो त ? ‘हो’ भनेर प्रमाण दिने कोही निस्किएको छैन । बरु ‘होइन’ भनेर आधार देखाउने धेरै छन् । विवाद बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षित उपाय निकालेको छ– हात्ती नै फेरिदिने । अब नेपालमै जन्मिएको जुम्ल्याहा हात्ती राम–लक्ष्मणको पोट्रेट तस्बिर छापिएका हजारका नोट अर्को दसैंसम्म आइसक्नेछन् । त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो समाचार आजको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा विजय बञ्जराले लेखेका छन् । यो पनिः काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि आउँदो भदौ २८ गतेवाट सर्वसाधाणका लागि नयाँ तथगा सफा नोट सटही गर्ने भएको छ । सर्वसाधारणले दशैंका लागि राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंक विभिन्न शाखावाट नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सर
Sep172019 by userNo Comments
अब भाडामा बस्नेले विद्युत् खपत गर्दा प्रति युनिट कति तिर्ने? जानिराखौ!
काठमाडौँ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा घर बहालमा बस्नेलाई घरबेटीले मनलाग्दी विद्युत् महसुल लिइएको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्राधिकरणद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, “प्राधिकरणसँग विद्युुत् लिएर मनलाग्दी तवरले व्यापार नगर्नूस्, जति महसुल उठेको हो, सोही अनुसार मात्रै घर बहालमा बस्नेसँग महसुल लिनूस् ।” प्राधिकरणले २० युनिटसम्मको विद्युतमा रु ३० सेवा शुल्क लिएको छ भने प्रतियुनिट रु तीनका दरले लिने गरेको छ । यस आधारमा २० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्नेले रु ९० महसुल तिर्नुपर्छ । यस्तै २१ देखि ३० युनिटसम्म सेवा शुल्क रु ५० र प्रतियुनिट रु सातका दरले लिने गरेको छ । यस आधारमा रु १२० महसुल तिर्नुपर्छ । यस्तै ३१ देखि ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले सेवा शुल्क रु ७५ र प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ५० पैसाका दरल